★မြန်မာ့အလင်း★: ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေကပြောနေတယ် . . . ဒို့မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါတဲ့
ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေကပြောနေတယ် . . . ဒို့မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါတဲ့
ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ကို ငါတို့ အမိမြန်မာပြည်ပေါ်မှ လုံးဝကို အမြစ်ဖြုတ်ပစ်ရမည်။ ပလီတစ်လုံးမှ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ မရှိစေရဘူး။ ကျွန်ကုလားတွေ သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ပြီး သွေးလှူလို့ အထင်မကြီးပါနဲ့။ ဒီကောင်တွေရဲ့ ဘာသာ လိမ်ညာ လှည့်ဖျားဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ၀ါဒပါ။ ဒီကောင်တွေရဲ့ ဘာသာဟာ လူသတ်ဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ၀ါဒပါ။ ဒီကောင်တွေရဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ဟာ ချေးစားတဲ့ ခွေးလောက်တောင်မှ အကျင့်သီလမရှိတဲ့သူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လျှင် မြန်မာပြည်မှ မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးကို အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်လုပ်ကြရမည်။ တာဝန်မဲ့စွာ လက်ပိုက်ကြည့်သည့် စောက်ကျင့်ကို ဖျောက်ကြပါ။
☀ ငါတို့မြန်မာတွေအားလုံး လက်တွဲပြီး ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်ကြပါစို့။ (မြန်မာဆိုသည်မှာ ဗမာ၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ ဓနု၊ ရှမ်း၊ မွန်စသည့် တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ရည်ညွှန်းပါသည်)
☀ ကျွန်ကုလားတွေကို သူတို့ရဲ့ မူရင်းဒေသကို ပြန်ပို့ကြပါစို့။
☀ ကျွန်ကုလားတွေကို သူတို့သိပ်ချစ်တဲ့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံကို ပြန်ပို့ကြပါစို့။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:10 AM
Soe Thuya said...
ညိဲလေး လုပ်လို့ ရမလား လုပ်ကြည့်လေ
တို့တိုင်းရင်း သားညီနောင်တွေထဲမှာ ကုလားမပါဘူး။ ခောတ်သစ်နယ်ချဲ့ ကုလားတွေကို တိုက်ထုတ်သင့်ပြီ။ ညီညွတ်ကြလေ တို့မြန်မာတွေ...........